HORDHACA BARNAAMIJ SIYAASADEEDKA XISBIGA/URURKA DADWEYNAHA SOMALILAND
Sunday March 14, 2021 - 19:12:19 in Maqaallo by Wariye Tiriko
BISMILAHI RAXMANI RAXIIM
maamulidda xidhiidhada caalamiga ah ee Somaliland waa inay ahaadaan kuwo muuqda oo sigib tiran (transparent) waxayna dhacayaan iyadoo lagala tashanayo baarlamaanka iyo hay'adaha dawladeed ee ku shuqul leh.
Nabadgalyadu maadaama ay tahay aasaaska nolosha aan la'aanteed wax suuragalayaa jirin Xisbiga/Ururka S.P.P waxa uu ka dhigayaa ahmiyada koowaad waxaana uu galin doonaa dedaalka ugu badan tamar iyo tacab ba.
Xisbiga/Ururka S.P.P waxa u qorsheysan la dagaalanka musuqa nooc kasta oo uu yahayba waxaana la mideyn doona hay'adaha maamul wanaaga iyo la dagaalanka musuqa dhamaantood iyada oo loo sameyn doono sharciyad adag.
Xisbiga/Ururku waxa uu aaminsan yahay si dimuqaradiyada iyo metelaada shacabka jamhuuriyada Somaliland u noqoto mid dhab ah in dalka loo badelo nidaamka loo yaqaano ( parliamentary system ) si qofkasta oo muwaadin ahi qaranka u hogaamin karo isla markaana isla xisaabtanka iyo is miisaamida hay'adaha qaranku u noqoto mid sigib tiran.
...... la soco qaybta 2aad